Haawaasni Oromoo Jabuutii keessaa 'doorsifamaa jirra' jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Haawaasni Oromoo biyya Jabuutii keessa jiran, walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi Somaalee jidduutti umameen walqabatee, dorsiisa irra gahaa jiruun sodaa cimaa keessa galusaanii BBC'tti himaniiru.
Embaasiin Itoophiyaa Jabuutti argamu ammoo, hanga yoonaatti rakkoon akkanaa jiraachuusaa odeeffannoon isaan qaqqabe akka hinjirre karaa bakka bu'aa isaanitiin nutti himaniiru.
Miseensa hawaasa Oromoo Jabuutii ta'uusaanii bilbilaan kan BBCtti himan Obbo Haasan, (maqaansaanii nageenyaaf jecha kan geeddarame), ''Dorsiifni guyyaa guyyaan nurra gahaa jira. Kanaafuu, wayita ammaa kanatti Jabuutii keessatti Oromoo ta'uun sodaachisaa ta'ee jira,'' jechuun dubbatu.
Akka Obbo Haasan jedhanittis, doorsisa tibbanaatu cime malees, mataa isaanii dabalatee yeroo garaa garaatti dararriifi reebichi irratti raawwatamaa turee jira.
Bakka bu'aan Embaasii Itoophiyaa Obbo Tasfaayee Yitaayiih garuu, waa'ee komii dhiyaatee gurraa akka hinqabneefi rakkoo cimaan saba Oromoo addaan baasuun irra gahu malu ni jiraata jedhanii akka hin yaanne dubbatu.
Karaa gara biraatiin ammoo embaasiichi osoo dhimmi akkasii kun hinka'iin duras rakkoon Oromoota irra akka hingeenye yaaduun, motummaa Jabuutii, bakka bu'oota hawaasa Oromoo achii, abbootii amantaa fi jaarsolii waliin marii taasisuu ni dubbatu.
''Garuu yeroo darbe jimaan Itoophiyaa dhufu Jabuutii osoo hingaliin hafuusaatiin walqabatee dargaggoonni biyyattii jeequmsa xiqqaa kaasuusaanii fi mootummaan biyyattiis haalicha hatattamaan to'annoo jala oolchuu dhageenyee jirra,'' jedhan Obbo Tasfaayeen.
Akka bakka bu'aa kanaatti, uummanni Jabuutiifi Oromoonni bara dheeraaf waliin jiraachaa kan turan waan ta'aniif, yoo haaluma jiru irraa ka'uun walitti bu'iinsa dhuunfaa ijoolleen daandiirratti umameen alatti, balaan cimaa Oromoota sodaachisu ni mudata jedhanii akka hin yaadne dubbatu.
Obbo Adam miseensi hawaasa Oromoo Jabuutii kan biraa ammoo, embaasiin Itoophiyaa dhimma Oromoo ilaalchisuun mootummaa Jabuutii waliin mari'achuusaa wanti beekan akka hin jirre dubbatu.
''Keessattuu erga badiinsa lubbuu Harargee Bahaa, Magaalaa Awwadaayiin booda, Pirezidaantiin Jabuutii namuu Oromoota akka hinxuqneef akeekkachiseera. Siriiyyuu kan faallaa kanaa raawwatees seeraan akka gaafatamu cimsanii midiyaan dubbataniiru,'' jedhan.
Haa ta'u malee, Oromoon biyya kana jiraatu irra caalaan kan rakkoolee siyaasaa, hawaasummaa fi diinagee qaban waan ta'aniif, haalli amma mul'achaa jiru kunis hojiilee xixiqqaa hojjachuun kanneen jiruusaanii mo'ataniif daran rakkisaa ta'aa dhufuusaa, Obbo Adam ni dubbatu.